रोचक छोरा या छोरी के जन्मिने ? थाहा पाउँनुहोस् यी १४ सरल घरेलु तरिका
Nepal Online Patrika| Kathmandu: कुनै एक महिला गर्भवती हुनु सम्पूर्ण परिवारको लागि खुशिको पल बन्छ । घरमा आउने नयाँ सदस्यलाई लिएर अनेकौं सपना बुन्न थाल्दछन्। त्यो शिशु छोरा या छोरी के होला सबको मनमा कौतोहलता सुरु हुन्छ । यद्यपी कुनै प्रविधिको प्रयोग गरेर लिं’ग छुट्याउँनु कानुनी रुपमा बर्जित छ । यो कार्य नगर्नुहोला । तर घरेलु उपाय अपनाउँने चलन निक्कै छ । प्रकृतिले गर्भमा नै मनुष्यको लि’ङ्ग निर्धारण गरेको हुन्छ । वास्तवमा, शिशुको जन्म भन्दा पहिले लिं’ग’ पत्ता लगाउनु नेपाल, भारत लगायत केहि देशमा अ’पराध जस्तै मानिन्छ । उनीहरुको कानूनले कुनै पनि टेक्नोलोजी वा मेशिनको सहायताले जन्म भन्दा पहिले भ्रु’णको लि’ङ्ग परीक्षणको लागि अनुमति दिँदैन। केहि व्यक्तिले लक्षणका आधारमा शिशुको लि’ङ्गकोअनुमान लगाउन सकिन्छ ।
एकपटक पढ्नुस आनन्द आउने छ “उनीसँग बिताएको दुई रात”, ज’नचे’तनाको लागि सेयर गरौं
हिजो साँझै बाट उनको फोन अफ छ । फेरी एक पटक फोन ट्राई गरें, नेपाल टेलीकमकी युवतीले फेरी उसं गरि भनिन ‘तपाईले सम्पर्क गर्न खोज्नु भएको मोवाईलको स्वच अफ गरिएको छ ।’
टाँसिएर पार्टनरसँग सुत्नुका ३ रोचक फाइदा !
हामी एक अनुसन्धानको बारेमा बताउँदैछौँ । यदि तपाईँहरुले आफ्नो पार्टनरसँग टाँसिएर सुत्नुका फाइदाहरुको बारेमा जानकारी गराउनेछौँ ।